November 2013 | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
Facebook v.3.8 (LATEST version)
DotA v6.79b Map (27 November released)
Christmas HD v.1.5 APK (ခရစ်စမတ်ပုံစံလိုချင်သူများ...
AppMgr Pro III (App2SD) v3.21 ( for Android )
100Keyboard Shortcuts (ကီးဘုတ် အတိုကောင့်် လေ့ကျင...
လူသားတိုင်းအတွက် အထူးလိုအပ်နေတဲ့ နေထိုင်နည်းလမ်းပြ...
Built In မြန်မာစာမပါသောAndroid ဖုန်းတချို့တွင် Bui...
Youtube To Mp3 Downloader လေးပါ
ဖုန်းထဲကနေ Download ဆွဲရတာ အရမ်းမြန်ချင်သူများအတွက...
အရမ်းကိုဆော့လို့ကောင်းတဲ့ Forest Runner.apk ဂိမ်း ...
Popular Post စတိုင်းအလန်း ( ၁ )
Viber အကြောင်းအခြားသူရဲ့ data တွေကို သူမသိအောင်ခို...
How to Remove/Replace Chinese VRoot superuser with...
bat file တွက် parameter 15ခုရှင်းလင်းချက်
ဒေါက်တာသင်းသင်း - လက်တွေ့ဇင်ဗုဒ္ဓဓမ္မခရီး
ImTOO DVD Creator 6.0.7.Full keys
အာဘွားးးးးးးးးစီးရီးခွေ ရဲ့ APK ( Off လိုင်းဖြင့် ...
Facebook 4.0.0.0.2 For Android Updated
Baidu Browser v.2.4.0.3 (ရွှေမြန်မာတွေအသုံးများဆုံး...
Candy Mania v.1.2 APK (Candy Crush Saga လိုမျိုး ပ...
DVDFab 9.0.4.5 Full
Huawei တွေမှာ Viber သူမကြားကိုယ်ကြား ကိုယ်မကြားသြူ...
ချစ်သူတွေ၊ မိဘတွေအတွက် ထောက်လှမ်းရေး Apk
Skype ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် update အသစ် Skype 6.11.0.1...
Flashtool ကို အသုံးပြုပီး Sony Phone တွေကို Firmwa...
စကားလုံးများကို LED စာသားအဖြစ်ပြောင်းပေးမဲ့ ..APK
Spy Recorder v.3.4 APK (SMS ကို spy လုပ်ချင်သူများ...
Android တွေအတွက် Internet booster များစုစည်းမှု့
GoforFile ( မိမိလိုချင်သော software များကို လိုင်စ...
Blog အတွက် Textarea လန်းလန်းလေး များ
Register Internet Download Manager FREE!! ဒေါင်းလေ...
Y300C/Y210 တွေမှာ အပေါ်က ဘာတန်းလေးပျောက်သွားရင်
Facebookမှာ လော့ကျနေတာကို ရအောင်ဖွင့်နည်း
iPhone version iOS 6.0. to 6.1.2 ရှိပြီးသားသူတွေ အ...
Blogger template နှင့် Post တွေပါ xml တစ်ခုလုံး ba...
မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Floating Touchလေးထည့်ထားကြည...
မိမိဘလော့ပို့စ်ရဲ့နောက်ခံ အရောင်လေး ပြောင်းပြီးလှပ...
How to Change for your blogger Template's Each Pos...
SMS Tracker v.3.121 APK (Message spy လုပ်ချင်သူမျာ...
Photo Calendar Studio 2014 1.11 Rus Portable (45Mb...
Password/Pin/Pattern Lock ကို ကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဖြုတ်ပ...
MPT Service ကလေးပါ
နံပတ် ၁ မည်သည့် android ဘားရှင်းမဆို root လုပ်နိုင...
Android ဖုန်းတိုင်းမှာ ရှိထား ဆောင်ထားသင့်တဲ့ RAM ...
Mozlla Firefix မှာ မြန်မာလို အပြည့် မပေါ်တဲ့ သူတွေ ...
Crack Bagan keyboard and frozen keyboard ထွက်ရှိလိ...
DJ ပွတ် Remix လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တော့ ဟောဒီမှာ Futu...
V-root မပေါက်တဲ့ S3 4.3 ကို Root မယ်
သင်ကွန်ပျူတာက ဆော့ဝဲလ်တွေကို သူများတွေ မသုံးစေချင်...
I Tun အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
jellay brean 4.1.2 တွေအထက်မှာမြန်မာစာမှန်ပြီ
iPhone,iPad,iPod တွေအတွက် iOS 7.0.3 Official Firmw...
2G3G4GFastInternetBrowser ( for Android )
MM Music Player Protable (50Mb)
မိမိဖုန်း ရဲ့ Screen ကို Video ပြန်ရိုက်ဖို့ Z Scr...
dj studio pro v9.2.4.3.8
Android Version 4.0.3 မှ 4.2.2 အထိ GApps သွင်းပေးန...
အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို အခြေခံမှ အဆင့်မြင့်အပိုင်းအထိေ...
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: android, Facebook နည်းပညာများ
နိုဝင်ဘာလ 27 ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ထုတ်ပါ။ Facebook apk ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ အဆင်ပြေအောင်လို့ တစ်ဆင့်ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။ Version က 3.8 ပါ။ iMyanmarFB ကိုလိုချင်ရင် http://adf.ly/a4J5X မှာယူပါ။ ပိုပြီးသိချင်ရင် http://adf.ly/a4Ipm ဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Android ဖုန်းဆော့ဝဲ
ခေါင်းစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘော်ဒါများ သဘောကျသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် လည်း သဘောကျပါတယ်။ အတော်လေးသဘောကျလို့ တွေ့တွေ့ချင်းဘဲ ချက်ခြင်းတင်ပေးလိုက်တာပါ။ စမ်းတာကတော့ မနက်ဖြန် Sunday ကျမှဘဲ အပြင်သွားရင်စမ်းရမယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လေးက WiFi ဖွင့်ပြီး ဒီ Application လေးကို Run လိုက်တာနဲ့ Free WiFi တွေကို လိုက်ရှာပေးပြီး လိုင်းအကောင်းဆုံး မိမိနဲ့အနီးဆုံးလိုင်းနဲ့ အလိုလျှောက်ချိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ကဲဗျာ မြို့ထဲတွေမှာနဲ့ Shopping Center တွေမှာလိုမျိုး WiFI တွေအများကြီး ပြန့်နေရင်တော့ ဒါလေးနဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Dota map
အခု နောက်ထပ်အသစ် Dota map လေးပါ။ 27 ရက်နေ့ နိုဝင်ဘာလထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ဆိုရင်မမှားဘူးပေါ့ဗျာ။ တခြား DotA map အဟောင်းများကိုယူချင်ရင်တော့ ဒီကိုကလစ်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: android, android live wallpaper
မိမိဖုန်းထဲမှာ Application Manager လိုအပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေ
ဒီကောင်လေးက ဖုန်းထဲမှာဆော့ဖ်ဝဲတွေ Install လုပ်တဲ့အခါ
Myanmar IT Sky
100Keyboard Shortcuts (ကီးဘုတ် အတိုကောင့်် လေ့ကျင့်နည်း) PDF
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: E-Book
အခုမှ computer စလေ့လာသူများအတွက် Keyboard Shortcuts အလွတ်မရသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့စာအုပ်လေးပါ။။
>>>>>>Download 100Keyboard Shortcuts<<<<<<
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး |
Android User များအတွက် ဖုန်းထဲမှာဆောင်ထားသင့်တဲ့ Application လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူကလည်း ကွန်ပြူတာမှာ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Zip & Rar ပုံစံမျိုးပါဘဲ။ ဖုန်းကနေ Application တွေ ကိုတိုက် ရိုက်ဒေါင်းပြီးအသုံးပြုမယ် ဆိုရင်တော့ Zip & Rar ကဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။အချို့သော Application တွေကို Zip ဒါမှမဟုတ် Rar တွေနဲ့ ချုံ့ပြီးတင်ထားပေးတက်ကြပါတယ်။ အဲဒါချိန်မျိုးမှာ AndroZip™ Pro File Manager လေးသာရှိထားမယ်ဆိုရင် ဖုန်းထဲမှာဘဲ Zip File ကို Apk ဖိုင်ဖြစ်အောင် Extract လုပ်ပြီး အသင့်သုံးရုံပါဘဲ။ ဒီကောင်လေးက Data တွေကို Zip ဖိုင်ကနေ Extract လုပ်ပေးနိုင်သလိုဘဲ။ Data တွေကိုလည်း Zip File အဖြစ် Archive လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင် အရေးကြီးပြီး သူများမကြည့်စေ ချင်တဲ့ File တွေကို Password ပေးပြီး Rar & Zip အဖြစ် ချုံ့ထားလို့ရပါတယ်ဗျာ။ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးက Computer မှာအသုံးပြုသလိုမျိုးပါဘဲ။ အသုံးတည့်ပြီး File Size သေးတဲ့ Application လေးဖြစ်လို့ ဆောင် ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
လူသားတိုင်းအတွက် အထူးလိုအပ်နေတဲ့ နေထိုင်နည်းလမ်းပြ ပင့်ကူဆုံးမစာလေးပါ
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: အွန်လိုင်း ဗဟုသုတ
လူသားအားလုံးအတွက် ဘ၀ခရီးကို အချိန်တိုတိုလေး ဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ် အဲလိုဖြတ်သန်းနေကြစဉ်မှာ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းကြရတယ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ နေနေရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့် အဲလို လူအဖွဲ့စည်းထဲမှာနေနေကြရတဲ့ လူသားအားလုံးကို ဒီ ကဗျာဆောင်ပုဒ်ကလေးအတိုင်းနေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင် အရမ်းကိုသာယာလှပတဲ့ လောကကြီး မလွဲကျိန်းသေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်လျှက် တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ.......... ဒီပုံလေးကို Share ပေးစေလိုပါတယ် ဖတ်ရသူ မြင်ရသူလူတိုင်း...
Posted By:Htet Aung Moe(ပျဉ်းမနားသား),Special Thanks To Saung Nyi Oo(ပျဉ်းမနားသား)
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ကွန်ပြူတာ Software
ဖိုင်ဆိုက်သေးသေးလေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးလို့ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။757 kb ပဲရှိတာပါ။
အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။တချို့စက်တွေမှာ net framework4တောင်းပါလိမ့်မယ်။မ၇ှိသေးရင် google ကသာ ရှာပြီအင်စတား လိုက်ပါ။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ
Virusအတုပြုပလုပ် ရ အောင်နော်...ဟီးဟီး...သူများတွေကအစစ်ကျနော်က တော့အတု။ဆန်းဆန်းပြားပြားလေး
LOL=msgbox(``The virus have beeb detecten!Press YES to format your hard disc now,or
Press NO to format your hard disc after the system reboot'',20,''Yat Sauk Tarlay'')
ရေးပြီးပြီဆိုရင် တော့virus.VBS နဲ့saveလိုက်ပါ။ဒါလေးကိုstickထဲcopyလုပ်ပြီးစချင် တဲ့သူငယ်ချင်းစက်ထဲ
ကိုstart>All programs>startupထဲကိုမသိမသာလေးထည့်လိုက် ပါ။သူငယ်ချင်း သူ့စက် စဖွင့် တဲ့အခါ
Warningဆိုပြီးစာသားလေးတက် လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုသူငယ်ချင်း လန့်ဖြန့်သွားပါလိမ့်မယ်:p
ctrl+s >file nameမှာcleaner.batလို့ရေးပေးပါ
ပြီးရင်double click လေးပေးလိုက်ပါ
title Yat Sauk Tarlay
SET T1= Done By myothantkyaw
Echo ******* *******
Echo ****** ******
Echo ***** *****
Echo **** Finished ****
msg* Thank you.Tawwinminntharlay `°•°´
ဒီနေ့ Nokia C6-01လေးတစ်လုံး မြန်မာစာထည့်ချင်တယ်လို့ပြောလို့လိုက်ရှာရင်း myanmarmobileapp.com ကဒီပို့စ်ကလေးတွေ့လို့ ပြန်ရှဲလိုက်ပါတယ်......
Font Zoomer အားရယူရန် ဒီမှာရောနော်
ဖုန်းထဲကနေ Download ဆွဲရတာ အရမ်းမြန်ချင်သူများအတွက် VA High Speed Downloader Pro
ဖုန်းထဲကနေ Download ဆွဲရတာ အရမ်းမြန်ချင်သူများအတွက်ပါ
highspeeddownloader_1.2.apk [324.72 Kb]